Mitantara Ny Zavatra Niainany Tamin’ny Famonjàna Azy Ireo Iraniàna Bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2017 7:51 GMT
Olona marobe no nalefa tany amponja noho ny resaka politika tao Iràna. Nizara ny tantarany tamin'ny boky, tamin'ny alalan'ny hosodoko na tamin'ny blaogin'izy ireo, ny vitsivitsy tamin'izy ireo. Niezaka ny nitazana ireo gadra tao anaty fonjan'i Iràna amin'ny fijerin'ny vahiny ety ivelany, izay tsy nifonja, ny olona sasany, anisan'izany ireo bilaogera sy ireo mpikaroka. Ndeha ho jerentsika eto ny sasany tamin'ny bilaogin-dry zareo:
Tazako ny Helo
Tamin'ny Janoary 2007, nandany fotoana tany ambadiky ny fefy vy nandritra ny 18 andro i Dokotera Hesam Firouzi, mpikatroka mikasika ny zon'olombelona sady mpitsabo nikarakara ny ankamaroan'ireo gadra politika. Mizara ny anjarany [Fa] mikasika ny zava-nanjo azy izy ao amin'ny blaoginy. Nitsikera ny toetran'ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ireo gadra i Dokotera Firouzi sady milaza fa raha toa ka afaka mahazo fitsidihana mpitsabo iray ny gadra iray dia tsy maintsy miandry 20 andro hafa manaraka vao mahazo ny fitsidihana faharoa. Milaza izy fa indray mandeha dia tafaraka tanaty trano famonjana iray izay sahabo ho 15 na 20 metatra monja niaraka taminà gadra hafa 19 hatramin'ny 20 eo ho eo. Lazain'i Dokotera Firouzi fa tao nanaty fonja dia azo vidiana mora foana ireo rongony sasany, anisan'ireny ny ‘crack’. Nanoratra taratasy ho an'ireo tompon'andraikitra manoritsoritra ny zavatra niainany ilay blaogera.
Milaza izy fa ny hany asa tokana ataon'ny mpoitsabo nify ao am-ponja dia ny fanalàna ny nifin'ireo gadra ary tsy misy afa tsy izay ihany. Ampian'ilay blaogera fa misy olona tena marary mafy tsy mahazo ny tokony ho fitsaboana ilainy. Mba hamintinana ny zavatra niainany, manoratra izy fa: “Ny masoko mihitsy no nahita ny afobe”.
Ny rongony no Mpanjaka
Ghomarasheghaneh, mpanao blaogy iray izay voafonja noho ireo lahatsoratra ara-politika nataony, milaza zavatra mifanohitra amin'ny finoana malaza, hoe maro ireo gadra no miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina any am-ponja. Lazain'ilay bilaogera fa amin'ireo gadra 120 dia maherin'ny 100 amin'ireo no mifoka zava-mahadomelina.
Milaza izy fa ny vidin'ny ‘crack’ any am-ponja dia avo folo heny noho ny vidiny any ivelany [Fa], izay mitarika fironana tanteraka ho an'ny maro mba hivarotra rongony. Manome antony vitsivitsy mahatonga ny fitombon'ny mpandrongony ilay blaogera:
1- tsy misy mpitsabo saina
2- miaraka ao avokoa ny mpankafy sy ny tsy mpankafy
3- tsy misy toerana famakiamboky na fanaovana fanatanjahantena
4- mitondra rongony miditra any ny sasantsasany amin'ireo mpiasan'ny fonja
5- tsy misy fanasarahana ireo gadra tanora sy ireo gadra efa nahazo taona. Ireo latsaky ny 25 taona no tena faran'izay marefo. Lazain'ilay bilaogera fa tena mampiahiahy azy fatratra tokoa ny hoe tsy mahalala izay mitranga akory ao ny tomponandraikitry ny fonja.
Mitohy ny ny ratsy
Nofonjaina niaraka tamin'ireo mpanao blaogy hafa vokatr'ireo antony ara-politika ary filam-baniny i Memarian. Milaza izy hoe olona tena mbola mitàna ny heviny foana. Mikasika ireo mpanadihady azy tany am-ponja, milaza izy fa olona vongany misary olombelona fotsiny izy ireo [Fa]. Ampiany hoe : “Rehefa nivoaka ny fonja aho, niteny tamin'ny tenako aho hoe aleo hadinoina any ireny olona ireny ary tsy avela hanozongozona ny hevitro, saingy mbola nihitsoka tao an-tsaiko foana io zavatra niainana io. Ireo ngonongonon'ireo mpiambina sy ny fihodin'ireo fanalahidin'ny varavaran'ny fonja nisy.”
Fiaiken-keloka An-terisetra sy Ireo nofinofy misidintsidina
Mba hamintinana ny fahatsapana ny tsy rariny, Kasra Anghaee, Iraniana iray poety, no mizara amintsika ny atao hoe any am-ponja:
Tao anatin'ny fahaverezan-tsiana aty ala mikitroka
nahita tranobongo misy rindrina fotsifotsy izahay
nefa taty aoriana, hitanay
fa nofinofy manidintsindina fotsiny ilay tranobongo
ary ary dia very izahay
ao anatin'ireo feon-kira mifamahofaho
nolalaovina antidahy iray mpahay mozika
tany andafin'ny renirano.